Top 6 iDVD uzo ozo / edochi anya
Apple abịa na nke kacha mma na ọkaibe omume ga-eme ka ọrụ afọ ojuju ma n'adịghị iDVD ọ dịghị onye n'ime ha na e kwụsịrị. Iji nweta ihe kasị mma iDVD version ọ na-gwara iji hụ na omume arụnyere, ma dị ka Apple akwụsịwo nkwado nke usoro ihe omume mere na ọ bụ irksome ibudata na wụnye ya na otu ala dị ka ọ bụ na n'oge gara aga. Kasị mma na ndị mfe ụzọ ga-esi nke a nke na-ibudata na wụnye omume na ndị kasị mma mgbe ọ na-abịa Mac OS. Ndị a nwekwara ike na-ahuta ka uzo ozo ka iDVD maka Mac.
Gịnị mere Alternatives?
Ka e kwuru tupu na iDVD nkwado e kwụsịrị na ihe iseokwu ndị na-persistent na-adịghị kpebiri. The ọrụ rie ya mere na-mbipụta na ikwu na iDVD nkwado nke mere na atụmatụ nwere ike na-enwe. Ọ bụ ya mere gwara na-aga site a nkuzi ruo ọgwụgwụ nke mere na n'elu 6 uzo ozo ka iDVD na-abụghị nanị ẹkenam ma onye ọrụ ọkọkpọhi ha arụnyere na-esi n'ime ihe iseokwu nke iDVD-eweta na mmekọrita ya na-arụ ọrụ na mkpokọta ụkpụrụ.
Top 6 iDVD uzo ozo / edochi Mac
Iji nweta ihe kasị mma pụta ndepụta na a na-ekwu na nkebi nke a bụ a ga-agbaso nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta. The software mmemme na-kwuru na a ngalaba a ga-atụle ma ọ bụrụ na iDVD a na ma-adịghị arụ ọrụ ruo akara ma ọ bụ na-eweta nsogbu ndị onye ọrụ mgbe imezu nzube ya maka ihe nke ọ e wuru. The windows OS ọrụ n'aka nke ọzọ nwekwara achọ ndị dị otú omume na rụrụ ọrụ nke iDVD na-eme. Ndepụta a na-atụ aro ndị niile na ọrụ na nke kacha mma omume na-eme ka ihe mfe n'ihi na onye ọrụ na n'ikpeazụ:
Akwado usoro: Mac / Windows
Kenkwukorita menus ekwe ka ndị ọrụ na nke kacha mma pụta n'ime kacha nta oge
Usoro ihe omume pụrụ ịrị ọ bụla bọtịnụ ma ọ bụ ndị graphic ihe na dị n'okpuru ajụjụ
The menu e kere eke bụ mgbanwe na ndabere nke scalable vector graphic
The nile na otu mfe iji omume na-enye ohere onye ọrụ na-eme ka ndị kasị mma ojiji nke DVD faịlụ site ere ha na-eji ndị kasị mma kwere omume
All formats na-akwado omume a. Ọhụrụ ọpụpụ nke ụlọ ọrụ na-kwukwara mgbe niile na-omume ruo akara
Download vidiyo si na 1000+ video nkekọrịta saịtị.
Ndị nchịkọta akụkọ nke e agbakwunyere n'ime na-enye ohere ka retouch foto na-enweghị kwụsị ịma mma ha, kama ọ na-agbakwụnye ọzọ iche ha
Otu click DVD-ere ọkụ nkwado bụ n'ebe na-eme ka usoro ihe omume na-enwu dị ka ogologo oge ọ na-achọrọ na nke a.
The n'ozuzu Ọdịdị nke usoro ihe omume ga-enweta ndị kasị mma pụta dị ka ọ dị mfe ịghọta na mejuputa ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Free DVD menu ndebiri bugoo n'ime omume na-eme ka ọ na otu n'ime ndị kasị Mmanu omume nke niile.
Daniusoft DVD Onye Okike
Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke formats na ike ike iji mee ka ojiji nke DVD nke ahụ bụ mmekọrịta na elu ka akara.
Ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe iji n'ihi na nke ndịna-emeputa na menus na-ndokwa ịdị uchu.
E nwere 10 preset ndebiri na ike ga-eji na-eme ka ọrụ mere na ịke enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Aimersoft DVD Onye Okike
Usoro ihe omume na-agbakwunyere na 60 mgbanwe mmetụta na-eme ka usoro mfe karị na ekwe ka onye ọrụ na-abịa ruo akara mgbe ọ na-abịa DVD ọkụ
The menus bụ ndị dị mfe ịghọta na mkpokọta mmetụta bụ ihe kasị mma na-n'ozuzu mmetụta na-bụ ọkaibe na nke a
The nkwụnye video nchịkọta akụkọ ọkọkpọhi kasị mma na nke kasị mkpa nkwụnye na nrụnye na ọkọkpọhi ha emelitere na Itie oge.
Leawo DVD Onye Okike
The format nkwado bụ nnukwu mere na onye ọrụ nwere ike fọrọ nke nta tọghata na ọkụ ọ bụla usoro ka DVD enweghị hassle
The interface bụ GUI dabeere nke pụtara kenkwukorita na onye ọrụ na onye na-enye ohere usoro ga-agwụ agwụ enweghị ihe ọ bụla nke.
The n'ozuzu functionalities na mmemme ndị kasị mma na ha na-ekwe ka onye ọrụ na nke kacha mma pụta n'ime oge ọ bụla ma ọlị.
Xilisoft DVD Onye Okike
Ọsọ nke usoro ihe omume dị ọtụtụ ihe ngwa ngwa dị ka tụnyere ndị ọzọ na e kwuru na a na ndepụta
The gburugburu na-mfe iji wụnye na-eji na Ya mere omume n'ozuzu ọnọde dịghị hassle ka onye ọrụ ọ bụla
The DVD ọkụ ikike nke usoro ihe omume ga-ekwe ka onye ọrụ iji nweta ndị kasị mma na ọkaibe ọrụ mere n'ime chaachaa huu kacha mma mma.
The iDVD pụrụ ịbụ ezi omume ma ọ bụrụ na onye ọrụ maara ins na outs enweghị enyemaka ọ bụla ma ahụ n'ezie ikpe dịgasị. The uzo ozo na e kwuru na a nkuzi ga-bụghị naanị ụgbọala ndị ọrụ ka mma pụta kama a ga-eme ka usoro mfe enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The windows ọrụ nwekwara ike zuru uru nke ihe omume na e kwuru ebe a na-omume na ndị yiri iDVD; ụfọdụ n'ime ha ọbụna gafee ya na-enweghị onyinyo nke obi abụọ. The mkpa nke hour bụ ịkwụsị iDVD ma malite iji ọ bụla nke ihe omume e kwuru iji nweta egwu nkwado na DVD ọkụ results.
3 ihe nke iDVD download on Mac i nwere mara
DVD9 VS DVD5, Top 10 Iche Ị nwere ike amaghị
Olee otú Download na Ọkụ Vimeo Video ka DVD
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka DVD Movies ma ọ bụ Videos na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Nweta Best Software Yiri ConvertXtoDVD
Olee otú iji tọghata MOD ka DVD na MOD ka DVD Ntụgharị
> Resource> DVD> Top 6 iDVD uzo ozo / edochi anya